ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ဖောက်သည်တော်ကြီးများ ခင်ဗျား, လန်ဒန်ရှိ Chase မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှထုတ်ဝေသော “The European” မဂ္ဂဇင်းတွင် FBSသည် “၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက် အရှေ့တောင်အာရှ အကောင်းဆုံး Forexအကျိုးဆောင်ဆု”ကိုရရှိခဲ့သည့်အကြောင်း ကြေငြာပြောကြားခွင့်ရသည့်အတွက် လွန်စွာမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်!
ဖောက်သည်တော်တွေကိုပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေရန်သာမက ပိုမိုရောင်းဝယ်နိုင်ကြစေရန်ပါရည်ရွယ်ပြီး အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေနှင့် စစ်မှန်အဆင်ပြေစေမည့် အရောင်းအ၀ယ်စည်းကမ်းချက်တွေကိုဖန်တီးပေးဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့လို့သာ ယခုလို ဆု ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကလွန်စွာမှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတာဖြစ်ပါသည်။
FBSကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖောက်သည်တော်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။! ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းက သန်းနဲ့ချီတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်သမားတွေကို အကျိုးရှိအောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေတိုင်း နာရီတွေတိုင်းမှာ ဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်။ – FBS ရင်းနှီးမှုအာမခံအစီအစဉ်, အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့် ပရိမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ, အပိုဆုအစီအစဉ်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများနဲ့ ဖောက်သည်တော်တို့ကို ၀န်ဆောင်ပေးနေ ပါတယ်။ ဖောက်သည်တော်တို့ကို ပြည့်စုံကြွယ်ဝ စိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက် ၀န်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။!
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး, ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ဆောင်မှုများကိုရယူကာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အကျိုးအမြတ်ရယူလိုက်ပါ!